एनिमेकर: डू यो आफु एनिमेसन स्टुडियो, मार्केटिंग भिडियो सम्पादक, र भिडियो विज्ञापन बिल्डर | Martech Zone
एनिमेटेड र लाइभ भिडियो प्रत्येक संगठनको लागि आवाश्यक हुन्छ। भिडियोहरू अत्यधिक व्यस्त छन्, गाह्रो अवधारणाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता छ र दृश्य र श्रव्य दुबै अनुभव प्रदान गर्दछ। जबकि भिडियो एक अविश्वसनीय माध्यम हो, यो प्राय: सानो व्यवसाय वा मार्केटरहरूको लागि आवश्यक संसाधनहरूको कारण असुरक्षित छ:
पेशेवर भिडियो र रेकर्डिंग को लागी अडियो उपकरण।
तपाईंको लिपिको लागि व्यावसायिक आवाज ओभरहरू।
पेशेवर ग्राफिक्स र एनिमेसनहरू सम्मिलित गर्न।
र, हुनसक्छ, सब भन्दा महँगो र महत्वपूर्ण स्रोत - प्रभावको लागि पेशेवर सम्पादन।
राम्रो समाचार यो हो कि हामीले प्रगतिहरू देख्न जारी राख्यौं - दुबै हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा। आधुनिक फोनले धनी kk रिजोलुसनमा सुन्दर भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ। एक सस्तो माइक्रोफोन जोड्नुहोस् र तपाईंको अडियो दृश्य अनुभव पूरक हुनेछ। परिचय, outros, संगीत, भिजुअल, वा एनिमेसनहरुमा लेयर र तपाइँ बैंक लाई तोडे बिना एक प्रभावी सामग्री मार्केटिंग टुक्रा हुन सक्छ।
एनिमेकरको एनिमेशन र सम्पादन प्लेटफर्म
एनिमेकरको ड्र्याग-एण्ड-ड्रप बिल्डरले सजीलो प्राविधिक सीपहरूको साथ पूर्व-निर्मित टेम्पलेटहरू र रेड-टु-गो सम्पत्ति प्रयोग गरेर प्रो-लेभल एनिमेटेड भिडियोहरू सिर्जना गर्न कसैको लागि सजिलो बनाउँदछ। प्लेटफर्म व्यक्ति वा टोलीका लागि निर्माण गरिएको छ कुनै पनि प्रकारको भिडियो विकास गर्न।
बजारहरूले एनिमेकरलाई ब्रान्ड ओभरभ्यू, अनबोर्डिंग भिडियोहरू, स्प्यान्डर भिडियोहरू, एनिमेटेड स्प्यान्डर भिडियोहरू, प्रदर्शन भिडियोहरू, ग्राहक प्रशंसापत्र, व्यापार प्रस्तुतिकरणहरू, भिडियो विज्ञापनहरू, स्लाइडशोहरू, इन्स्टाग्राम भिडियोहरू, फेसबुक भिडियोहरू, र यूट्यूब भिडियो र भिडियो विज्ञापनहरूको लागि प्रयोग गर्दैछ।
सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू मध्ये एक एनिमेकरले तपाईंलाई सजिलैसँग विभिन्न प्लेटफर्महरूको लागि तपाईंको भिडियो पुन: निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। केवल रिसाइज बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तुरून्त बिभिन्न भिडियो प्रकारहरू बीच स्विच गर्नुहोस्।
यहाँ केहि अन्य अविश्वसनीय सुविधाहरू र कार्यक्षमता छन्:
एनिमेकरको एनिमेसन स्टुडियोले तपाईंलाई सबै आवश्यक उपकरणहरूसँग तपाईंको एनिमेटेड भिडियो डिजाइन गर्न र प्रकाशन गर्न सक्षम गर्दछ:
चरित्र निर्माणकर्ता - १ 15 भन्दा बढी अनुहार सुविधाहरू अनुकूलन गर्न र १० भन्दा बढी एसेसरी स्लटहरूको साथ, तपाईले चाहानु भएको चरित्र निर्माण गर्नुहोस् र तपाईंको भिडियोहरू मसला दिनुहोस्!
चरित्र अनुहारको भाव - २० भन्दा बढी अनुहारको भावको साथ, एनिमेकरले तपाईंको क्यारेक्टर र भिडियोहरू जीवनमा ल्याउँदछ।
Auto Lip-Syncronization - तपाईंको क्यारेक्टरहरूमा भ्वाइसओभरहरू थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्वत: लिप-सिnc्कको साथ यो भन्नुहोस्। तपाईंले चरित्रको ओठमा एनिमेसन गर्न समय खर्च गर्नु पर्दैन।
स्मार्ट चाल - एनिमेटरहरू तिनीहरूको समयको लगभग %०% एनिमेसन वस्तुहरू एक ठाँउबाट अर्को स्थानमा जान खर्च गर्छन्। र हामीले तपाईंको समय र प्रयास बचत गर्ने निर्णय गरेका छौं। जटिल एनिमेसनहरू स्मार्ट बटन प्रयोग गरेर एनिमेट गर्नुहोस् केवल एक बटनको क्लिकको साथ।
अब तपाइँको पहिलो एनिमेसन सिर्जना गर्नुहोस्!
तपाईंको साक्षात्कार, प्रशंसापत्र, वा अन्य रेकर्ड गरिएको भिडियो अपलोड गर्नुहोस् एनिमेकर क्यामेरा प्रभावहरू, स्क्रिन प्रभावहरू, अडियो ट्र्याकहरू, ट्रान्जिसन, र अधिक रूपमा तपाईंको भिडियोमा प्रो-लेभल अनुभव थप्न धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
प्रत्यक्ष भिडियो सम्पादन र 4K भिडियो गुणवत्ता - छान्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस्, र सम्पादन गर्नुहोस् भिडियो एकै ठाउँमा सबै। एनिमेकरले तपाईंलाई प्रामाणिक 4K गुणवत्ता भिडियोहरूको साथ बाहिर खडा गर्न दिन्छ।
तपाईंको भिडियो उपशीर्षक - एनिमेकरको साथ, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो भिडियोहरू प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि तयार हुनको लागि उपशीर्षक गर्न सक्नुहुन्छ।
एक क्लिकको साथ ओभरले भिडियोहरू - पाठ, छवि, स्टिकर, र अधिकको साथ ओभरले भिडियोहरू।
तपाईंको सामग्री वाटरमार्क - सजिलैसँग तपाईंको लोगोमा भिडियोहरू र GIFs मा तपाईंको आफ्नै वॉटरमार्कको साथ स्ट्याम्प गर्नुहोस्।
स्टक सम्पत्ति - तपाईको प्रयोगको लागि १० करोड भन्दा बढी सम्पत्ति। एनिमेकरको पुस्तकालय पनि गेटीको साथ एकीकृत छ तपाईंको परियोजनाको लागि सही छवि वा भिडियो फेला पार्न सजिलोको लागि!
रोयल्टी मुक्त संगीत र ध्वनी प्रभावहरू - एनिमेकरले तपाईले ध्वनी मोर्चामा १०० भन्दा बढी संगीत ट्र्याकहरू र हाम्रो अडियो पुस्तकालयमा हजारौं ध्वनि प्रभावहरू समावेश गर्दछ।
अब तपाइँको पहिलो भिडियो सिर्जना गर्नुहोस्!
एनिमेटेड GIF र छोटो भिडियो निर्माता
एनिमेटेड GIFs सामाजिक मिडिया र ईमेल मार्केटिंगको लागि उत्कृष्ट हो ... तपाईंको परियोजनाको लागि उत्तम GIF फेला पार्न सजिलोको लागि एनिमेकरको पुस्तकालय पनि Ghi सँग एकीकृत छ!
तपाईंको एनिमेटेड GIF अब सिर्जना गर्नुहोस्!
सहयोग र ब्रान्ड व्यवस्थापन
तपाईंको टोलीलाई तपाईंको भिडियोहरूमा काम गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस्। एनिमेकरले तपाइँको ब्राण्डको ईमानदारीता तपाइँ सबै प्रकाशित भिडियोहरु भर निरन्तर राखिएको छ सुनिश्चित गर्न एक ब्रान्ड किट पनि प्रदान गर्दछ।
भिडियो मार्केटिंग क्यालेन्डर
प्रयोगकर्ताहरूले अब एक भिडियो मार्केटिंग क्यालेन्डर भरी भरी भिडियो विचारहरूले भरिएका हुन्छन् तपाईलाई योजना बनाउन र बर्षभर विशेष दिनको लागि भिडियोहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न। केवल सेक्शनमा नेभिगेट गर्नुहोस् जुन हालको महीनामा यसको शीर्षकको रूपमा छ र तपाईंसँग तपाईंको सोशल मिडिया उपस्थिति बढाउन असंख्य प्रमाणित भिडियो सामग्री विचारहरू छन्।
एआई-चालित भ्वाइस ओभरहरू
प्लेटफर्मले कम्तिमा अनुकूलन गर्न र प्रतिभा भर्नाको आवश्यकता बिना तपाईंको स्क्रिप्ट आउटपुट गर्न आवाज-ओभर बुद्धिमत्ता समावेश गर्दछ। एनिमेकरको आवाजले तपाईंलाई सक्षम पार्दछ:
मानव-जस्तै भ्वाइस ओभर - सजिलै तपाईको टेक्स्ट वा स्क्रिप्टलाई रूपान्तरण गर्नुहोस् उच्च गुणवत्ताको जस्तो मानव ओभर ओभरमा
उन्नत आवाज नियन्त्रणहरू - कुनै चयनित शब्दमा टोन, पज, वा जोड थप गर्नुहोस्। तपाईं आवाज फुसफुसा बनाउन वा सास फेर्न पनि सक्नुहुनेछ।
बहुभाषी आवाज विकल्पहरू - तपाईंको भिडियोको लागि +०+ आवाज र २ different फरक भाषाहरूमा भ्वाइस-ओभरहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
अब एक भ्वाइसओभर सिर्जना गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ एनिमेकर र यस लेख भर मा तिनीहरूको लिंक छ।
टैग: aiऐ भ्वाईस-ओवरऐ भ्वाइसओभरएनिमेकरएनिमेटेड gifएनिमेसनएनिमेसन स्टुडियोतानेर खसाल्नुअन्यभिडियो रिसाइज गर्नुहोस्स्टक एनिमेसनशेयर भिडियोभिडियो सहयोगभिडियो सम्पादनभिडियो मार्केटिंग क्यालेन्डरभिडियो प्रकाशनभिडियो स्टुडियोभिडियो टेम्प्लेटहरूआवाजआवाज माथि
कसरी अनुक्रमणिका वर्डप्रेसबाट खोज इञ्जिनहरू रोक्न